सामाजिक सञ्जालमा संसारभरी भाइरल भएको यो अनौठो च्यालेन्ज:: Naya Nepal
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा समय–समयमा अनेक कुराहरु भाइरल भइरहेका हुन्छन् । यस्तै अहिले एक अजिब खालको च्यालेन्ज भाइरल भइरहेको छ । प्रायः नयाँ चुनौती सुरु हुन्छ र यो अचानक भाइरल हुन थाल्छ । हालसालैका दिनहरूमा यस्ता धेरै प्रवृत्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् ।
कुनै चुनौती वा प्रश्नको बदलामा एक सीधा उत्तरको आशा गरिन्छ । तर यदि कसैले तपाइँलाई प्रश्न सोधेको छ र गलत जवाफको अपेक्षा गरिरहेको छ भने के हुन्छ ? यो अचम्म मान्नु पर्ने कुरा होइन, किनकी ट्विटरमा त्यस्तै प्रश्न र उत्तर च्यालेन्ज एकदम भाइरल भइरहेको छ, जसको जवाफमा गलत उत्तर खोजिएको छ ।
भर्खरै, वाइल्डलाइफ्सओएसले आफ्नो ट्विटरमा एक भिडियो साझा गरेको थियो । उक्त भिडियोमा रूखमा बसेको एक जनावरको पुच्छर देखाइएको छ । यस भिडियो सेयर गर्दै क्याप्शन लेखेका छन्, ‘यस प्रजातिलाई अनुमान लगाउनुहोस्, केवल गलत उत्तर दिनुहोस् ।’ मानिसहरूले यसलाई रमाईलो चुनौतीको रुपमा मजा लिइरहेका छन् ।
मान्छेहरु जवाफ मात्र दिइरहेका छैनन् यसमा एक अर्कालाई चुनौती पनि दिइरहेका छन् । तपाईं भिडियोमा यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि जंगली जनावरको पुच्छर चलिरहेको छ । तर तपाईंले कुन जनावर पत्ता लगाउनुपर्छ ।
मानिसहरूले गलत जवाफ पनि यसरी दिए कि हर कसैलाई हाँस्न मन लागेर आउँछ । कसैले उसलाई चितुवा, बिरालो यहाँसम्मकी कोही चरासम्म नि भन्दैछन् । खैर, के तपाईंलाई थाहा छ यो कुन जनवारको पुच्छर हो ? तपाईपनि लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् न ।
यसकारण हाम्रा छोरी चेली सुरक्षित छैनन् : विद्यालय भित्रै शिक्षिकालाई शिक्षकले गरेको ह’र्कत भिडियोमा हेर्नुस्
काठमाडौं । आफ्नै समकक्षी शिक्षिकामाथि क’र’णीको प्रयास गर्ने शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेको छ । विद्यालयमै शिक्षकबाट भइरहेको त्यो गलत व्यवहारको चपेटामा परेकी शिक्षिकाले बिहीबार प्रहरीमा गएर लिखित उजुरी दर्ता गरेकी हुन् । दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दले १८ वर्षभन्दा माथिकाले सिधै अदालतमा गएर मुद्दा दिनसक्ने भएपनि प्रहरीले सार्वजनिक अ’परा’धमा मुद्दा दर्ता गर्नसक्ने जानकारी दिनुभयो ।
चन्दकाअनुसार सार्वजनिक अ’परा’धमा ती शिक्षिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराहीमा गएर आफूलाई क’र’णीको प्रयास गर्ने शिक्षकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता तथा डीएसपी सुमित खड्काले पीडितको जाहेरी अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो । घोराहीस्थित सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक रामकुमार रानाले सोही स्कुलकी एक शिक्षिकामाथि गलत व्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।
भिडियो बाहिर आएपछि बुधवार रानालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । २३ वर्षीय शिक्षक राना घोराही उपमहानगरपालिका–१५ निवासी हुन् । शिक्षक रानाले भिडियोमा ती शिक्षिकालाई आफ्नो नी’जी अं’गमा कैं’ची राखेर निकाल्ने गरिहेको भिडियोमा देखिन्छ । पीडितको ठाडो जाहेरीका आधारमा बुधवार शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
ती शिक्षक पक्राउ परेको दोस्रो दिन पीडितले प्रहरीमा गएर उनीविरुद्ध लिखित जाहेरी दिएकी हुन् । मुलुकी अ’परा’ध संहिताले नै सार्वजनिक स्थलमा नी’जी अं’ग देखाउन नहुने सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
संहिताको परिच्छेद ५, दफा १२२ मा १० वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले स्वास्थ्य विज्ञान वा चिकित्सा सम्बन्धी उपचारको प्रयोजनका लागि बाहेक सार्वजनिक स्थानमा यस्तो गलत क्रियाकलाप वा व्यवहार गर्न वा नी’जी अं’ग देखाउन वा कसैलाई अ’पच हुने शब्द बोल्न वा इशारा गर्न पाइदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।